the Kali Linux - Hacker တွေ အသုံးများဆုံး OS - Part5- Khit Minnyo
Unlabelled the Kali Linux - Hacker တွေ အသုံးများဆုံး OS - Part 5
the Kali Linux - Hacker တွေ အသုံးများဆုံး OS - Part 5
by KhitMinnyo on January 11, 2021
2.1. Installing Applications on Kali Linux
Kali မှာ Application တွေ install တာကအစ ခက်တာမို့လို့ Newbie to Linux တွေအဖို့ မသုံးသင့်ဘူး ဆိုတဲ့စကားမျိုး နေရာစုံကနေ ကြားကောင်းကြားရနိုင်ပါတယ်။ Linux ကို ခုမှ စ သုံးမယ့်သူတွအတွက် Kali က အဲသလောက်တောင် ခက်သလားလို့ မေးဖွယ်ရှိပါတယ်။ ဒီအတွက် အဖြေက No ပါ။
နည်းနည်းလောက် စဥ်းစားကြည့်ရအောင်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Windows, Linux, Mac, Android, iOS စသည်ဖြင့် မည်သည့် Operating System ကို သုံးသည်ဖြစ်စေ တူညီတဲ့အချက်ကတော့ ရှိပါတယ်။ OS တွေ အများကြီးရှိတာပေမယ့် လူတိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ Android OS ဆိုပါစို့။ Application တစ်ခုခုကို install လုပ်ချင်ရင် ဘာလုပ်ရပါသလဲ။ စဥ်းစားကြည့်စရာတောင် လိုမယ်မထင်ပါဘူးနော်။
Android ဖြစ်တဲ့အတွက် PlayStore ကို သွားမယ်။ အဲမှာ App ရှာမယ်။ ရှာတွေ့ရင် အဲမှာပဲ install မယ်။ ရှာမတွေ့ရင်တော့ Third Party source တစ်ခုခုကနေ ရှာပြီး Download ဆွဲ install လုပ်မယ်ပေ့ါ။ ဟုတ်တယ်မို့လား။ Windows မှာဆိုရင်လည်း WinStore မှာ ရှာမယ်။ မတွေ့ရင် သက်ဆိုင်ရာ software ရဲ့ official website ကနေတစ်ဆင့် download ပြီး install မယ်။ ဘာများခက်လို့လဲ။ Linux မှာလည်း ထို့အတူပဲ။ Kali Linux မှာဆိုရင်လည်း သူ့ရဲ့ App Store ကနေ ရှာမယ်။ တွေ့ရင် အဲကနေ install လုပ်မယ်။ မတွေ့ရင် သူနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ official website ကနေ ဝင်ဒေါင်းပြီး install လုပ်ရုံပေါ့။ ဒါကို ဘာကြောင့်များ Kali Linux ကျမှ ပိုခက်ခဲရမှာတဲ့တုန်း။ 😁
ဒီအပိုင်းမှာတော့ ဒီလို အဆင့်ဆင့် install ပုံ၊ Software ရှာပုံ စတာတွေကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ တစ်ခုစီ မပြောခင်မှာ ထုံးစံအတိုင်း တော်ကီနည်းနည်းပွားပါမယ်။ ဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ Kali ကို သုံးနေပြီဖြစ်စေ၊ သုံးဖို့ ကြံနေပြီဖြစ်စေ အနေအထားတစ်ခုခုမှာ ရှိနေပြီလို့ သတ်မှတ်ပါမယ်။ ဒါကြောင့် သင် သုံးချင်ရင် ရဲရဲသာ သုံးပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ khitminnyo.com ဆိုတဲ့ blog လေးမှာလည်းပဲ Kali နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တာတွေရယ် ဖြစ်တတ်တဲ့ error တွေ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာတွေနဲ့ ဘယ်လို ရှင်းရမယ်ဆိုတာတွေကို တင်ပေးထားတာ အများကြီးရှိပါတယ်။ အပြောင်းအလဲကို မကြောက်ပါနဲ့။ မဆုံးဖြတ်ခင်မှာ စဥ်းစားပါ။ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ ဆက်လုပ်ပါ။ Kali နဲ့ပဲ (ဂိမ်းကလွဲရင်) ဘာလိုလို သုံးနိုင်တဲ့ အထိ အသားကျတဲ့အထိ ဆက်သွားပါ။ အစကတည်းက မလုပ်ချင်ရင် မလုပ်ပါနဲ့ ကိစ္စမရှိပါ။ စဥ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဆက်လုပ်၊ လမ်းတစ်ဝက်မှာ လှည့်ပြန်တဲ့ လူညံ့တော့ မဖြစ်ပါစေနဲ့။
ကြော်ငြာ - WiFi Hacking အကြောင်း ရေးထားတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ စာအုပ်လေးကိုလည်း ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်နော်။ စာအုပ်အကြောင်း သိလိုပါက ဒီမှာနှိပ်ပါ blog ရဲ့ My Books menu မှလည်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ 😊
2.1.1. Store ကနေ install ခြင်း
ခေါင်းစဥ်သဘောအရသာ Store ကနေ လို့ ခေါင်းစဥ်တပ်ထားတာပါ။ Linux မှာကျတော့ source လို့ ခေါ်တယ်။ ဒီတော့ကာ Store ကို Source လို့ ပြောင်းမြင်ပေးလိုက်ရင် Windows and Android တွေနဲ့ သဘောတရား တူသွားပြီ။ ဒါပဲ။ မခက်ပါဘူး။ လက်တွေ့ ပြရင် ပိုရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ Android or iOS တွေမှာ AppStore တွေကနေ ရှာတာကိုတော့ မပြတော့ဘူးနော်။ သိပြီးသားမို့။ Kali Linux မှာ vlc player ကို ရှာပြီး install လုပ်ကြည့်ကြစို့။
kmn@AiO:~$ sudo apt search vlc
အထက်ပါအတိုင်း sudo apt search vlc လို့ ရိုက်ပြီး ရှာနိုင်ပါတယ်။ vlc player ကို ရှာမှာမို့လို့ပါ။ sudo လို့ ထည့်ရိုက်ရတာကတော့ apt command တွေကို သုံးတဲ့အခါ super user access (root access) လိုအပ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို နောက် အလျဥ်းသင့်တဲ့နေရာမှာ အကျယ် ပြောပြပါမယ်။
sudo ပါတဲ့ command ဘာဖြစ်ဖြစ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရိုက်တဲ့အခါ အထက်ပါပုံမျိုး မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ password ကတော့ ကျွန်တော်တို့ login ဝင်ခဲ့တဲ့ password ကို ရိုက်ထည့်ပြီး enter လိုက်ရမှာပါ။ သတိပြုရမှာက sudo password ရိုက်တဲ့အခါ (Terminal မှာ pasword ရိုက်တဲ့အခါ) ဘာကိုမှ မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ ရိုက်စရာရှိတာ ရိုက်ပြီး Enter လိုက်ရုံပါပဲ။ လွယ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်ပြီးရင်တော့ နောက်ထပ် အဲလိုစာအများကြီး မပေါ်တော့ပါဘူး။ sudo ပါတာရိုက်ပြီးရင် password ထည့်စရာ တစ်ကြောင်းပဲ ပေါ်မှာပါ။ ပြီးတော့ Terminal တစ်ခုဖွင့်ပြီး sudo ရိုက်ပြီးရင် အဲသည် terminal ကို မပိတ်မချင်း အဲသည် Terminal မှာ sudo ပါတာ ဘာထပ်ရိုက်ရိုက် password ထပ်ထည့်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ Terminal ကို ပိတ်လိုက်ရင်ဖြစ်စေ၊ Terminal အသစ်တစ်ခုမှာ sudo ရိုက်ရင်ဖြစ်စေ အဲလိုဆိုရင်တော့ password ပြန်ထည့်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
[sudo] password for kmn:
vlc/kali-rolling 3.0.11.1-3 amd64
ပုံမှာ အနီးစပ်ဆုံး မြင်ရမယ့် ပုံစံကို ပြထားပါတယ်။ sudo password ထည့်ပြီးတဲ့အခါ apt search နဲ့ သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် vlc ဆိုတဲ့ Application ကို ရှာပါလိမ့်မယ်။ vlc ပါတဲ့ package တိုင်းကို ဖော်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံထဲမှာလို တစ်ခုပဲ မြင်ရမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အများကြီး မြင်ရမှာပါ။ ဒါက ကျွန်တော် ရွေးထုတ်ပြထားတာမို့ပါ။ ကျွန်တော်ရှာလိုက်တဲ့ vlc ကို vlc/kali-rolling 3.0.11.1-3 amd64 လို့ မြင်ရပါတယ်။ / ရဲ့ ရှေ့က package name ပါ။ အရောင်ခွဲပြီး ပြပါတယ်။ အပေါ်က ပုံမှာ ကြည့်ရင် မြင်နိုင်ပါတယ်။ amd64 ဆိုတာက ကျွန်တော့်ရဲ့ system သည် 64bit ဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ။ 32bit တင်ထားသူတွေကတော့ i386 လို့ မြင်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ နောက်မှာ သူ့အတွက် ဖော်ပြချက်ကို ဖတ်ကြည့်တော့ multimedia player and streamer လို့ တွေ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း။ VLC Player ကို ရှာတာပါ။ Mov တွေ သီချင်းတွေ ဖွင့်ဖို့ဖြစ်လို့ ဒါ ကျွန်တော်ရှာတဲ့ package အစစ်အမှန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူ့ package name က vlc ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစာလုံးတွေချည်းပဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ VLC player သည် source (Store) မှာ ရှိပြီဆိုတာကို သိပါပြီ။ package name လည်း သိပါပြီ။ ဒါကြောင့်မို့ sudo apt install package_name ကို သုံးပြီး install လုပ်နိုင်ပါပြီ။ ရှာတုန်းက search။ ခု install လုပ်မယ်ဆိုတော့ install ။ မှတ်ရတာ မခက်ပါဘူး။
kmn@AiO:~$ sudo apt install vlc
install တဲ့အခါ အဆိုပါ package ကို install ဖို့ရာအတွက် ဒေတာ MB ဘယ်လောက်လောက် ကုန်နိုင်တယ်။ storage မှာ ဘယ်လောက်လောက် နေရာယူမယ် စတာတွေကို ဖော်ပြပြီး ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မှာလား ဆိုပြီး မေးလေ့ရှိပါတယ်။ အောက်ပါ ပုံကို လေ့လာကြည့်ပါ။
ပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Do you want to continue? [Y/n] ဆိုပြီး တွေ့ရပါမယ်။ yes ဆိုရင် y လို့ရိုက်ပြီး enter ရမှာဖြစ်သလို no ဆိုရင် n လို့ ရိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ yes or no မေးထားတာကို ပြန်ကြည့်ရင် Y ကို အကြီးစာလုံးနဲ့ ရေးထားပြီး n က အသေးစာလုံးဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါမယ်။ Y သည် Default ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ Default Y ဖြစ်တာကြောင့် ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် y လို့ ရိုက်ပြီး enter လို့လည်းရသလို ဒီတိုင်းပဲ Enter လိုက်ရင်လည်း Y ပဲ ဖြစ်ပါမယ်။ ဒီလို yes or no ကို apt install တိုင်းမှာ မေးမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ File size သေးလွန်းတဲ့ package တွေကို မေးလေ့မရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ essential tool or package တွေကို မေးလေ့မရှိပါဘူး။ တိုက်ရိုက်ထည့်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ပုံသေ မမှတ်ပါနဲ့။ မေးရင် ဖြေ၊ မမေးရင် မဖြေရုံပေါ့။
kmn@AiO:~$ sudo apt install vlc -y
Yes or no တွေ မေးလာရင် yes ဖြေနေရတာကို မကြိုက်ဘူး၊ တစ်ခါတည်း တန်း ဖြေထားမယ်ဆိုရင်တော့ အထက်ပါအတိုင်း -y parameter လေးကို ကြိုထည့်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုထည့်ပေးခြင်းအားဖြင့် yes or no မေးရင် yes ဖြေပါ လို့ ကြိုပြောထားတဲ့သဘော ဖြစ်တဲ့အတွက် ထပ်ဖြေနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ပိုပြီးနားလည်သွားအောင် libreoffice ကို install ကြည့်ရအောင်။
kmn@AiO:~$ sudo apt install libreoffice -y
ဒီခါတော့ Photo Editor တစ်ခုခုကို ရှာကြည့်ရအောင်။ package name ကို မသိဘူး ဆိုပါစို့။ sudo apt search photo edit ဆိုပြီး ရှာလိုက်ပါမယ်။
ထွက်လာတာတွေကို ဖတ်ကြည့်ရင် အများကြီးပဲ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ fotoxx, clementine, darktable, gimp စတဲ့ package name တွေကို တွေ့နိုင်မှာဖြစ်သလို သူတို့အောက်မှာလည်း ဒါသည် ဘာ tool (program) ဆိုတာကို ဖော်ပြထားတာက ဖတ်ရလွယ်ကူပါတယ်။ ဒီထဲကမှ ကိုယ် install လုပ်ချင်တဲ့ package ကို ရွေးပြီး install လုပ်ရုံပါပဲ။ ခု ဖော်ပြထားတဲ့ photo editor လေးတွေကို သုံးကြည့်ပါ။ တကယ်မိုက်ပါတယ်။ gimp ဆိုရင် Linux အတွက် Photoshop လို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလေးခုလုံးကို command တစ်ကြောင်းတည်းနဲ့ install လုပ်ချင်ရင်လည်း ရပါတယ်။ အောက်ပါအတိုင်း ရိုက်ရုံပါပဲ။
kmn@AiO:~$ sudo apt install fotoxx clementine darktable gimp -y
gimp လို package တွေမှာ dependency တွေ အများကြီး လိုအပ်တယ်ဆိုပေမယ့်လို့ apt install က လိုအပ်တဲ့ dependency တွေကိုပါ ပူးတွဲထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်လို့ အေးဆေးသက်သာ ပြီးသွားမှာပါ။ ကိုယ်က အချိန်လေးခဏ စောင့်ပေးရုံပါပဲ။
အကယ်၍များ install လုပ်ထားတဲ့ package တစ်ခုခုကို ဖယ်ထုတ် uninstall လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ sudo apt remove package_name -y ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ -
kmn@AiO:~$ sudo apt remove gimp -y
uninstall လည်း လုပ်မယ်။ သက်ဆိုင်ရာ settings လို၊ data လိုဟာတွေကိုပါ ပယ်ဖျက်ပစ်မယ်ဆိုရင်တော့ sudo apt purge package_name ပုံစံကို သုံးရပါမယ်။
kmn@AiO:~$ sudo apt purge gimp -y
ဒါဆိုရင်တော့ apt command ကို သုံးပြီးတော့ application တွေကို install uninstall လုပ်တတ်ပြီလို့ ယူဆပါမယ်။ နောက်တစ်ပိုင်း ဆက်ကြတာပေါ့။
2.1.2. Other Sources ကနေ install ခြင်း
ဟိုးအစမှာကတည်းက ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ source မှာ မရှိတဲ့ package တွေကိုကျတော့ install ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုရင် search, download ပြီးတော့ install ဒီပုံစံပေါ့။ လက်တွေ့လေး လုပ်ကြည့်ရအောင်။
Kali မှာ Browser အနေနဲ့ Firefox browser က built-in အနေနဲ့ ပါပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Chrome Browser ကို လက်တွေ့ ထည့်သွင်းကြည့်ရအောင်။
kmn@AiO:~$ sudo apt search chrome browser
ရှာကြည့်တဲ့အခါ chrome browser ကို source မှာ ရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒီတော့ Official Website ဖြစ်တဲ့ google.com/chrome ဆိုတဲ့ လိပ်စာကို Kali ထဲမှာ ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့ Firefox browser ကနေ ရိုက်ဖွင့်ပြီး သွားလိုက်မယ်။
Download Chrome ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းမယ်။
Debian/Ubuntu ဆိုတာကို default အတိုင်း တွေ့ရပါမယ်။ Ubuntu က လူသိများတာမို့ တွဲပေးထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သုံးမယ့် Kali ရော၊ Ubuntu ရောသည် Debian Based တွေသာ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် Accept and Install လုပ်လိုက်မယ်။
Save ရွေးပြီး OK လိုက်မယ်။
ခုဆိုရင်တော့ Download ဆွဲလို့ ပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ်။ Terminal ဖွင့်မယ်။
root@kmn:~# cd Downloads
cd Downloads ကို သုံးပြီး Downloads folder ထဲကို ဝင်ပါမယ်။ cd ဆိုတာက change directory ကို အတိုကောက် သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ Linux မှာ Folder တွေကို Directory လို့ သုံးပါတယ်။ ls command ကို သုံးပြီး လက်ရှိ directory ထဲမှာရှိနေတာတွေကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ Linux system သည် Windows နဲ့ မတူတာက case sensitive ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက စာလုံးအကြီးအသေး လုံးဝ လွဲလို့မရပါဘူး။
ls နဲ့ list ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါ အထက်ပါအတိုင်း google-chrome-stable_current_amd64.deb ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို တွေ့ရပါမယ်။ .deb ဖိုင်ပါ။ .deb ဆိုတာ Debian Package လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဒီအမျိုးအစား ဖိုင်တွေကို install တဲ့အခါ dpkg -i ကို သုံးရပါတယ်။ dpkg ဆိုတာက Debian Package ပေါ့။ -i (parameter) ကတော့ install လုပ်မယ်ဆိုတာကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။
dpkg -i file_name နဲ့ install ကြည့်တဲ့အခါ အထက်ပါအတိုင်း error မြင်ရပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် sudo access မပါလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
sudo ထည့်ရိုက်ပါမယ်။ ထုံးစံအတိုင်း sudo password (Login Password) ရိုက်ထည့်ရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ အထက်ပါအတိုင်း install လုပ်သွားတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
install ပြီးသွားတဲ့အခါ default အားဖြင့် Menu ထဲက Usual Applications ထဲမှာ Internet ဆိုတဲ့အပိုင်းထဲ ရောက်သွားမှာပါ။ Firefox Browser ကိုလည်း အဲမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Right Click နှိပ်ပြီး Add to favourite လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နောက်တစ်ခါ menu ဖော်လိုက်ရုံနဲ့ ဖွင့်လို့ရသွားမှာပါ။ အောက်ပါပုံကို ကြည့်ပါ။
Favourite list ထဲက အောက်ဆုံးမှာ တွေ့ရပါမယ်။ ဖိနှိပ်ထားပြီး အပေါ်ကို တွန်းတင်ခြင်းအားဖြင့် သူ့ကို နေရာရွှေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ Add to panel, desktop စတာတွေကိုလည်း စမ်းကြည့်သင့်ပါတယ်။
ခုဆိုရင်တော့ Chrome Browser ကို အောင်မြင်စွာ install လုပ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ deb package တွေထဲက တစ်ခုကို install လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလောက်နဲ့တော့ မရသေးပါဘူး။ deb ထဲက Teamviewer software ကို ထပ်ထည့်ကြည့်ရအောင်။
Teamviewer for Linux Download link
Debain package ကို download လုပ်ရမှာ သိပြီးပြီနော်။
ခုန Chrome browser တုန်းကလို Downloads directory ထဲကိုဝင်ပြီး sudo dpkg -i နဲ့ install တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လို့ error ဆိုတာကိုပဲ result မှာ မြင်နေရပါမယ်။ သေချာဖတ်ကြည့်ရင် Dependency error ဆိုတာကို တွေ့ရမှာပါ။ သဘောကတော့ TeamViewer ဆိုတဲ့ software run နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ package တွေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ system မှာ ရှိမနေသေးလို့ လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ အဲဒါမျိုးအတွက်ကတော့ source ကို အရင်ဆုံး အားကိုးရပါမယ်။
အထက်ပါအတိုင်း ဖြေရှင်းလိုက်ပါတယ်။ သုံးလိုက်တဲ့ command လေးက
root@kmn:~# sudo apt --fix-broken install -y
apt ကို သုံးပြီး fix လုပ်ခိုင်းတာပါ။ ခုန dependency လိုနေတဲ့ broken package ကို fix ခိုင်းလိုက်တာပါ။ အဲလိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါ apt သည် ပထမဆုံးအနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ dependency တွေကို သူ့ရဲ့ source မှာ ရှာပါတယ်။ ရှာတွေ့ရင် လိုနေတာတွေကို သူ့ဘာသာ install လိုက်ခြင်းအားဖြင့် ခုန error ကြီး ပျောက်ပြီး ဖွင့်သုံးလို့ ရသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်က -y ကတော့ yes or no ထပ်မေးလာရင် ဘာဖြေမလဲ ကြိုထည့်ထားတာပါ။ ကြိုမထည့်ဘဲလည်း ရတယ်နော်။
သတိပြုရမှာက apt --fix-broken install သည် Dependency error တိုင်းကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါ။ ခုန ပြောခဲ့တယ်နော်။ ပထမဆုံး source မှာ လိုတာတွေကို ရှာတယ်။ တွေ့ရင် install တယ်လို့။ မတွေ့ရင်တော့ အဲသည် broken package ကို remove လုပ်ပစ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ uninstall လုပ်ပစ်မှာကို ပြောတာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့တာဝန်က error ကို fix ဖို့ ဖြစ်နေလို့ပါ။
ဒါကြောင့်မို့ source မှာ dependency မရှိတဲ့အခါ အခြားနေရာတွေကနေ လိုတဲ့ဖိုင်ကို ရှာပြီး သီးသန့် install ခြင်းနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - လိုနေတဲ့ dependency က libqt5core5a ဆိုပါစို့။ google ကိုသုံးနိုင်သလို debain package site မှာ တိုက်ရိုက်လည်း ရှာနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည် Kali သုံးနေတာဖြစ်တယ်။ Kali သည် Debian မျိုးနွယ် ဖြစ်တာကြောင့် libqt5core5a ကို .deb တပ်ပြီး ရှာနိုင်ပါတယ်။ libqt5core5a.deb ပေါ့။
https://packages.debian.org/ ကနေ နမူနာ ရှာပြထားတာပါ။ debian package site ကနေ ရှာတာမို့ .deb ထည့်စရာမလိုဘဲ ရှာနိုင်တာပါ။
google ကနေ ရှာပြထားတာပါ။ နမူနာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို dependency error အတော်များများ ကြုံလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘာသာ ဖြေရှင်းနိုင်လာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဇွဲရှိဖို့နဲ့ ငါရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်လေးရှိရင် dependency လိုလို့ ရှာဒေါင်းကာမှ ရှာသွင်းတဲ့ဟာက dependency ထပ်လို၊ ထပ်ရှာ ထပ်လို ထပ်ရှာ ဆိုတဲ့ အထပ်ထပ်ကိစ္စတွေကိုတောင် ကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပါပဲ။ ဒါလေးဖတ်ပြီး အကျိုး တစ်စုံတစ်ရာ ရ သွားတယ်ဆိုရင် ဝမ်းသာလှပါပြီ။ နောက်နေ့ နောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ Deb file တွေ မဟုတ်ဘဲ အခြားဖိုင်တွေကို ဘယ်လို install မယ်ဆိုတာကို ဆက်ဆွေးနွေးပါမယ်။ see u .....
Unknown January 11, 2021 at 9:17 AM
installလုပ်ထားတာကို desktopပေါ် ဘယ်လိုတင်လည်း သိချင်ပါတယ် Sir
GODZILLA January 28, 2021 at 6:01 AM
Jar Binks April 22, 2021 at 12:14 PM
Most IT specialists consider ethical hacking as plain hacking because it still makes use of knowledge of computer systems in an attempt to crash or penetrate them. Most business owners consider it ethical because of its purpose, which is to increase the security in systems. hireahacker cheap
Anonymous April 30, 2021 at 7:55 AM
Unknown August 22, 2021 at 7:34 PM
Kali ကို virtual box မှာတင်ထားတာ kali ထဲက network ချိတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် ဘယ်လိုချိတ်ရတာလဲဗျ window နဲ့က wifi ချိတ်ထားပြီးသားပါ